Monday October 12, 2015 - 13:44:14 in Xiriirka Kubadda Kolayga by Nocsom Editor
Tababarka garsoorka Soonka 5-aad (Zone V Referees Clinic) oo Magaalada Muqdisho 6 Oktoobar uga furmay garsoorayaashas Soomaaliya iyo Masar ayaa la soo gebogabeeyay , waxaa xafladii xeritaanka oo ka dhacday Gos kasoo qayb galay masuuliyiin ka socotay
Tababarka garsoorka Soonka 5-aad (Zone V Referees Clinic) oo Magaalada Muqdisho 6 Oktoobar uga furmay garsoorayaashas Soomaaliya iyo Masar ayaa la soo gebogabeeyay , waxaa xafladii xeritaanka oo ka dhacday Gos kasoo qayb galay masuuliyiin ka socotay Gos, qaar kamid ah madaxda Xiriirada dalka, masuuliyiintia Xiriirka kubadda kolayga ,Ciyaartoy hore.
Ugu Horreyn waxaa halkaas ka hadlay Kusikmaha Xoghayaha XSKK Cabdi Cabdulle Baasaale, waxuuna sheegay in mudada shanta maalin uu aqoon kororsiga socday garsoorka la baray sharciyada Cusub iyo sidii loo dhaqan gelin lahaa isla markaana loo qabtay ciyaaro lagu tijaabiyo lagu na qaaday imtixaano isugu jira, aqoonta sharciyada, Luqadda iyo orodka kuwaa oo dhammaan guulo ku dhamaaday.
Guddoomiyaha XSKK Cabdullaahi Nuur Maxamed Cadaani ooisna xafladaka hadlay ayaa sheegay in Ujeedkan aqoon kororsiga xiriirka juhdiga ugu bixiyay ay tahay sidi ay soomaaliya ku yeelan lahaydgarsoorayaal heer Caalamiah , garsoorayaasha Imtixaanka Zone V Clinic- ku guulaystayna ay u raadin doonaan mid heer Caalami ah.
Guddoomiye Cadaani ayaa intaa ku daray in aqoon korosiga uu xigi doono dhanka macalimiinta , waxuuna mahad celin usoo jeediyay Gos oo door muhiim ah ka qaadatay qabsoomida aqoon kororsiga, macalinka Fiba ka Socda Axmed Al Falaki iyo garsoorayaasha Reer Masar ee aqbalay in ay tababarka Soomaaliya uga qayb qaataan.
Axmed Al Falaki oo isna goobta ka hadlay ayaa yiri ” Aqoon kororsiga waxuu ahaa mid guulaystay, waxaana doonayaa in aan u mahad celiyo intii ka shaqaysay in aan halkan imaado tababarkana aan bixiyo,” waxaan joogay maalmo kooban , basle cajiib ah dadka Soomaaliyeed ay si wanaagsan ii soo dhaweeyeen.
AL falaki ayaa garsoorayaasha u sheegay in ku taagan yihiin wadadii ay heer caalami ku noqon lahaayeen, laakiin looga baahan yahay dadaal dheeri ah si ay u gaaraan hiigsigooda, waxuuna hadiyayka soco xiriirka kubadda Kolayga Masar guddoonsiiyay Guddoomiye Cadaani, isagoo dhankiisa hadiyay ka guddoomay xiriirka kubadda kolayga Soomaaliya.
Sara Gamaal oo ka mid ah garsoorayaasha reer Masar ee aqoon kororsiga ka qayb qaatay oo xaflada ka hadashay ayaa mahad celin usoo jeedisay garsoorayaasha Soomaaliyeed ay tabaraka wadaqaateen waxayna halkaas ku guddoonsiisay buugga cusub ee sharciyadda kubadda kolayga, sidoo kale iyada iyo garsoorayaasha reer kale ee reer masar ayaa hadiyo la wadaagay masuuliyiinta iyo qaar ka mid ah garsoorayaasha Soomaaliyeed.
Ugu Damabeyn waxaa xafladda soo xeray Guddoomiyaha Gos Cabdullaahi Axmed Tarabi waxuu tilmaamay in la kordhiyo aqoonta garsoorka ay muhiim tahay, balse garsoorayaasha laga doonayo ni ay la yimaadaan wada shaqayn wanaagsan oo dhexdooda ah iyo in ah xiriir wanaagsan ay la yeeshaan macalimiinta si ay is aaminaad u timaado taasoo laf dhabar ah howsha garsoorka.
Guddoomiye Tarabi ayaa dhanka kale u mahad macalinka iyo garsoorayaasha ka qayb qaatay tababarkan ee u dhashay dalka Masar , waxuuna xiriirka kula dardaarmay in uu halkisa kasii wado horumarinta kubadda kolayga.
Waa Markii ugu horreysay oo tabarkan lagu qabto dalka Soomaaliya kaddib 1990-ki waana guul usoo hoyatay Isboortiga Soomaaliya, gaar ahaan kubadda Kolayga oo horumar ku tallaabsanaysa.